ဆုဖလားတွေဆိုတာက ဂွါဒီယိုလာ ရယူဖို့အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတာလား
ဆုဖလားတွေဆိုတာက ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရယူဖို့အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတာလား
6 Aug 2018 . 6:01 PM
အရင်တုန်းကဆိုရင် ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ကို (၁၀)နှစ်အတွင်း ဆုဖလား(၂၄)ခုအထိ ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူမှတောင် ထင်ထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာစီလိုနာလူငယ်အသင်းကနေ စီနီယာအသင်းကို စတင်ကိုင်တွယ်တော့ ပထမဆုံးပွဲမှာ နူမန်စီယာကို ရှုံး၊ ဒုတိယပွဲမှာ ရေးဆင်းနဲ့ သရေကျခဲ့တဲ့အထိ ရလဒ်ဆိုးခဲ့တဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်ကို အားလုံးက လှောင်ပြောင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်က စလို့ ဂွါဒီယိုလာဆိုတာ ဆုဖလားတွေ ရယူဖို့အတွက် ဖြစ်တည်လာသလားလို့တောင် မေးယူရတယ်။ ယူလိုက်တဲ့ ဆုဖလားတွေ၊ ရလိုက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ။
ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ချယ်လ်ဆီးကို အနိုင်ယူပြီး ကွန်မြူနတီဒိုင်း ရယူခဲ့တဲ့ ဂွါဒီယိုလာဟာ သူ့ရဲ့ Trophy Cabinet ထဲ ပထမဆုံး ကွန်မြူနတီဒိုင်းကို ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလို ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းပြတွေထဲက တစ်ဦးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဆုဖလားတွေနဲ့ သက်သေပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ (၄)ရာသီအတွင်း ဆုဖလား(၁၄)ခုအထိ ရယူခဲ့တယ်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့လည်း (၃)နှစ်အတွင်းမှာ ဖလား(၇)လုံးအထိရခဲ့သူ။ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ Emperor က အင်္ဂလန်အထိ ဖြန့်ကျက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်လောက် မလွယ်ခဲ့ဘူး။ မန်စီးတီးနည်းပြဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အထိ အဖြစ်ဆိုးခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတွေ ရယူခဲ့တယ်။ မန်ချက်စတာမြို့ကို ခြေချတာက (၂)ရာသီပဲရှိသေးတယ် ဂွါဒီယိုလာ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားက(၃)ခုအထိရှိနေပြီ။
အခု သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်က ချန်ပီယံလိဂ်ဖြစ်လာပြီ။ ၂၀၁၁ နောက်ပိုင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ၊ ၁၉၆၉-၇၀ ရာသီတုန်းက European Cup Winners’ Cup ဆွတ်ခူးပြီးနောက်ပိုင်း ဥရောပအောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတွေနဲ့ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ဂွါဒီယိုလာ ဒီရာသီမှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် ဂွါဒီယိုလာ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားများ
ဆုဖလားတှဆေိုတာက ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရယူဖို့အတှကျ သတျမှတျပေးထားတာလား
အရငျတုနျးကဆိုရငျ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ကို (၁၀)နှဈအတှငျး ဆုဖလား(၂၄)ခုအထိ ရယူနိုငျလိမျ့မယျလို့ ဘယျသူမှတောငျ ထငျထားမှာ မဟုတျဘူး။ ဘာစီလိုနာလူငယျအသငျးကနေ စီနီယာအသငျးကို စတငျကိုငျတှယျတော့ ပထမဆုံးပှဲမှာ နူမနျစီယာကို ရှုံး၊ ဒုတိယပှဲမှာ ရေးဆငျးနဲ့ သရကေခြဲ့တဲ့အထိ ရလဒျဆိုးခဲ့တဲ့ နညျးပွတဈယောကျကို အားလုံးက လှောငျပွောငျတဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ကွညျ့ခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီအခြိနျက စလို့ ဂှါဒီယိုလာဆိုတာ ဆုဖလားတှေ ရယူဖို့အတှကျ ဖွဈတညျလာသလားလို့တောငျ မေးယူရတယျ။ ယူလိုကျတဲ့ ဆုဖလားတှေ၊ ရလိုကျတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ။
ပွီးခဲ့တဲ့စနနေကေ့ ခယျြလျဆီးကို အနိုငျယူပွီး ကှနျမွူနတီဒိုငျး ရယူခဲ့တဲ့ ဂှါဒီယိုလာဟာ သူ့ရဲ့ Trophy Cabinet ထဲ ပထမဆုံး ကှနျမွူနတီဒိုငျးကို ထညျ့သှငျးနိုငျခဲ့တာဖွဈသလို ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောငျးဆုံး နညျးပွတှထေဲက တဈဦးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို ဆုဖလားတှနေဲ့ သကျသပွေနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ (၄)ရာသီအတှငျး ဆုဖလား(၁၄)ခုအထိ ရယူခဲ့တယျ၊ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့လညျး (၃)နှဈအတှငျးမှာ ဖလား(၇)လုံးအထိရခဲ့သူ။ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ Emperor က အင်ျဂလနျအထိ ဖွနျ့ကကျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အရငျလောကျ မလှယျခဲ့ဘူး။ မနျစီးတီးနညျးပွဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ဖလားလကျမဲ့ဖွဈခဲ့ရတဲ့အထိ အဖွဈဆိုးခဲ့ပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလားတှေ ရယူခဲ့တယျ။ မနျခကျြစတာမွို့ကို ခွခေတြာက (၂)ရာသီပဲရှိသေးတယျ ဂှါဒီယိုလာ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားက(၃)ခုအထိရှိနပွေီ။
အခု သူ့ရဲ့ပဈမှတျက ခနျြပီယံလိဂျဖွဈလာပွီ။ ၂၀၁၁ နောကျပိုငျး ခနျြပီယံလိဂျဖလားနဲ့ ဝေးကှာနတေဲ့ ဂှါဒီယိုလာ၊ ၁၉၆၉-၇၀ ရာသီတုနျးက European Cup Winners’ Cup ဆှတျခူးပွီးနောကျပိုငျး ဥရောပအောငျမွငျမှုနဲ့ ဝေးကှာနတေဲ့ မနျစီးတီးအသငျးတို့ရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြကလညျး ခနျြပီယံလိဂျဖလားပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလားတှနေဲ့ မနျစီးတီးပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျစခေဲ့တဲ့ ဂှါဒီယိုလာ ဒီရာသီမှာလညျး ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူပေးနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .
နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ ဂှါဒီယိုလာ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမြား